Accueil > Gazetin'ny nosy > Famotsiam-bola
Orinasa goavana 3 mitsikombakomba avo lenta
Ela ny ela ka irosoan’ny rafi-pitsarana miady amin’ny kolikoly antsoina hoe « PAC » na « Pôle Anti-Corruption » ny karana mitantana orin’asa telo goavana eto amintsika, ka ny tontolon’ny famotsiam-bola no fototry ny fanadihadiana. Nisy anefa ny fotoana nahenoana fa efa nitsoaka teto Madagasikara ny sasany amin’izy ireo. Mety ho irika tsy hahita-mangirana ny voka-panadihadiana ve izany fitsoahan’ny sasany tsy ho hita soritra intsony eto Madagasikara izany ? Tsy iza moa ireo orin’asa na tranom-barotra goavana ireo fa ny « Océan Trade miaraka amin’ny Districar sy ny Discodis ary ny Madauto ».
Raha ny marina dia efa ampolon-taonany no nananan’ny olom-pirenena mpanara-maso ny raharaham-pirenena ahiahy ny tontolon’ny varotra fiara ataon’izy ireo ary efa antaonany no re fa nanara-maso ny momba azy ireo ny tompon’andraikitra tsara sitra-po, saingy tsy afa-nanoatra satria nisy hatrany ny tsikombakomban’ireo tranom-barotra ireo tamin’ny manam-pahefana ambony ara-panjakana.
Varotra fiara no tena sahanin’izy ireo ka izay tontolon’ny varotra fiara izay no ifotoran’ny famotsiam-bola. Harena ankibon’ny tany eto aloha no tena lalaovin’izy ireo, dia ny volamena izany, hoy ny fantatra. Mampiditra fiara eto ry zareo dia naman’ny madio ilay vola vidin’ny volamena naondrany any ampita rehefa mivadika fiara ilay vola. Amin’izao fotoana dia efa ny zanak’ireo mpitantana teo aloha no tena mibaiko ny andro ratsy sy andro tsara amin’io fanjakazakana mifototra amin’ny fireharehana ho manam-bola io. Tanora vao erotrerony manodidina ny 25 ka hatramin’ny 30 taona ireo zanak’ireo karana nisahana an’ireo tranom-barotra ireo amin’izao fotoana. Mba hanaporofoana aminao fa manao izay hahombiazany ry zareo amin’io famotsiam-bola io dia aleon-dry zalahy mivarotra fiara mora kokoa na misy mahasahy mividy lafo aza, ka mihodina amin’ny tranom-barotr’izy ireo ny entana (fiara) ary ny ihafarany dia madio ny vola vidin’ny fiara satria olona madio ihany no mividy azy. Ilay mividy mora dia ny orin’asan-dry zalahy samy zalahy ihany fa avy eo lafony amin’ny olon-tsotra ihany ilay fiara.
Mahavelom-bolo ny mandre fa manokatra fanadihadiana sy famotorana momba ny famotsiam-bola ataon’izy ireo ny rafi-pitsarana, ary ny antenain’ny maro dia mba tsy hisy ny fanelanelanana avy amin’ny manam-pahefana ambony ara-panjakana ary mba tsy ho laitran’ny « tampi-maso » ny mpitsara mpanao ny fanadihadiana.